Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Sariiraha Cisbitaalka Shiinaha - Baili Medical
Dharka ilaalinta la tuuri karo
galoofyada la tuuri karo
Jeermiska iyo jeermiska
Taageerada Nolosha Maalinlaha ah
Calool-celinta iyo Daryeelka Caafimaadka
Aaladaha Baarista Caafimaadka
Daaweynta hurdada iyo neefsiga
Labbiska Daryeelka Dhaawaca
Qalabka Gargaarka Degdegga ah
Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee shaqaynaysa oo badan
Bixiyaha Degdegga ah
Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka
Qalabka Sariiraha Cisbitaalka
Qalabka Durida iyo Faleebada
Qalabka Suuxinta iyo Agabka
Qalabka Daaweynta Neefsashada
Qalabka Qolka Shaqada
Qalabka Imtixaanka Caafimaadka
Baxnaaninta iyo Jimicsiga
Qalabka Ilaalinta Caafimaadka
Daawaynta Baxnaaninta Cane
Gargaarka Socodka iyo Kursiga Curyaanka
Lafaha iyo Lafaha go'an
Qalabka daaweynta jireed
Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka
Miiska Duugista iyo Kursiga
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka
Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka
Qalabka Tijaabada Degdegga ah
Tijaabooyinka Xadgudubka Daroogada
Tijaabada Dhimashada ee Galmada Lagu Kala Qaado
Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha
Tijaabooyinka Calaamadaha Wadnaha
Heerkulbeegga Infrared Digital
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Sariiraha Cisbitaalka
Maaskarada Ilaalinta Qalliinka ee la Tuuri karo
Maaskarada rayidka ah ee la tuuri karo
Qalabka neefsiga ee KN95 oo aan lahayn Valve Neefsashada
Qalabka neefsiga ee KN95 oo leh Valve Neefsashada
Qalabka Sariiraha Cusbitaalka sidoo kale waxa loogu yeeri karaa sariir caafimaad, sariir caafimaad, sariirta kalkaalinta, iwm, waa sariirta ay isticmaalaan bukaanada isbitaalka.
Qalabka Sariiraha Isbitaalka, oo loo kala saari karo sida soo socota: marka loo eego walxaha, waxaa loo qaybin karaa sariiraha caafimaadka ee ABS, dhammaan sariiraha caafimaadka ee birta ah, sariiraha caafimaadka ee birta ah, dhammaan bacaha birta ah ee lagu buufiyo sariiraha caafimaadka, iwm.
Qalabka Sariiraha Cusbitaalka waxa loo qaybin karaa sariirta cusbitaal koronto ah iyo sariirta gacanta ee cisbitaalka. Sariirta cusbitaalka korontada waxa loo qaybin karaa shan hawlood oo sariirta cusbitaal koronto ah iyo saddex hawlood oo sariirta cusbitaal koronto ah, iwm.
Qalabka Sariiraha Cusbitaalka waxa loo qaybin karaa sariiraha cisbitaalka ee lugaha leh iyo sariiraha cisbitaalka xagasha midig, kuwaas oo sariiraha cisbitaalka korontadu ay guud ahaan yihiin taayir guurguura.
Qalabka Sariiraha Cisbitaalku waxa uu leeyahay noocyo badan, sida: Sariir koronto oo aad u hooseeya oo saddex shaqaynaysa, sariirta daryeelka guriga, sariir caafimaad oo sariir leh, sariirta gubta, sariirta samatabbixinta, sariirta hooyada iyo ilmaha, sariirta, sariirta ilmaha, sariirta ICU, sariirta baaritaanka, iwm.
Miiska Sariirta Caafimaadka
Miiska sariirta ee caafimaadka waxa loo qaybiyaa sanduuqa dhinac iyo doonista u doodaha, doonnida dhinac waa doonta dhinaca yar ee dhigaysa dhinaca bidix iyo midig ee madaxa sariirta. Doonta u doodaha waa ka dheerar aad u badan marka loo eego sanduuqa madaxa dhinaca sariirta sida caadiga ah, waa doonnida maqaarka birta ah ee 4 yimaado 6 albaab oo caadi ah ama sanduuq alwaax ah. Inta badan waxaa lagu isticmaalaa qolalka jiifka, qolalka jiifka, qolalka bukaanka, hoteelada iyo qolalka kale ee leh sariiraha nolosha iyo waxbarashada. Halbeegga golaha dhinaca sariirta waxaa ka mid ah ilaalinta dhinaca sare, bar, saxan cunto oo aan la arki karin, khaanad, hoos waxaa lagu dhejin karaa armaajooyin, waxaa lagu dhejin karaa albaabka, tuwaalada, jillaab kala duwan, taayirrada iyo qaybaha kale, waa qay......
Akhri wax dheeraad ahU dir sooji
Furaash lafaha ah waa si loo hubiyo in macaamiishu ay helaan hurdo caafimaad iyo raaxo leh oo ay isticmaalaan nooc ka mid ah jirka bini'aadamka iyo sariirta dhexdooda. Maaddada furaashku way kala duwan tahay, furaashyada ay sameeyaan walxo kala duwan waxay u keeni karaan saameyn morphize ah qofka.
Pad Medical waa si loo hubiyo in macaamiishu ay helaan hurdo caafimaad iyo raaxo leh oo ay isticmaalaan nooc ka mid ah jidhka bini'aadamka iyo sariiraha dhexdooda. Maaddada furaashku way kala duwan tahay, furaashyada ay sameeyaan walxo kala duwan waxay u keeni karaan saameyn morphize ah qofka.
Sariiraha hoose ee la tuuri karo ceshad la'aanta
Sariiraha hoostooda ee la tuuri karo ceshad la'aanta waa si loo hubiyo in macaamiishu ay helaan hurdo caafimaad iyo raaxo leh oo ay isticmaalaan nooc ka mid ah jirka bini'aadamka iyo sariirta dhexdooda. Maaddada furaashku way kala duwan tahay, furaashyada ay sameeyaan walxo kala duwan waxay u keeni karaan saameyn morphize ah qofka.
Liiska Warqadda Caafimaadka
Warqadda Daawaynta oo sidoo kale loo yaqaan warqadda daawada, waxaa loo isticmaalaa baakadaha gudaha ee dawooyinka, ka masaxidda wasakhda boogaha ama buuxinta dhalooyinka daawada. Loo isticmaalo dhinacyada caafimaadka ee waraaqaha kale ee shaqada ee kala duwan ayaa sidoo kale loo tixraacaa warqad caafimaad. Warqadda la isku qurxiyo ayaa inta badan lagu daraa.
Miiska sariirta sariirta ka badan ee caafimaadka lagu hagaajin karo
Miiska sariirta sare ee caafimaadka la hagaajin karo Doonta u doodaha waa ka dheerar aad u badan marka loo eego sanduuqa madaxa dhinaca sariirta sida caadiga ah, waa doonnida maqaarka birta ah ee 4 yimaado 6 albaab oo caadi ah ama sanduuq alwaax ah. Inta badan waxaa lagu isticmaalaa qolalka jiifka, qolalka jiifka, qolalka bukaanka, hoteelada iyo qolalka kale ee leh sariiraha nolosha iyo waxbarashada. Halbeegga golaha dhinaca sariirta waxaa ka mid ah ilaalinta dhinaca sare, bar, saxan cunto oo aan la arki karin, khaanad, hoos waxaa lagu dhejin karaa armaajooyin, waxaa lagu dhejin karaa albaabka, tuwaalada, jillaab kala duwan, taayirrada iyo qaybaha kale, waa qayb yar oo isku xiran oo keliya oo kaydinta la saari karo. . Waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo maqaallada nolol maalmeedka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Sariiraha Cisbitaalka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Sariiraha Cisbitaalka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Sariiraha Cisbitaalka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.
No.266 Lujiang Road, Degmada Siming, Xiamen, Shiinaha
Xuquuqda daabacaada 2021 Baili Medical Supplies (Xiamen) Co., Ltd. - Gacno-gashiyada la tuuri karo - Dhammaan Xuquuqaha way xifdisan yihiin.